art and painting » Random of Nang Nyi
တကယ်တော့ လူသားတိုင်းဟာ မွေးဖွားလာချိန်မှာ အနုပညာဓာတ်ခံ ပါလာပြီးသားပါ.. ဒါကို သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာထားသူတွေကလည်း ထောက်ခံကြတယ်.. ကလေးတွေ ငယ်တုန်းက ပန်းချီဆွဲကြတယ်.. ကလေးတိုင်း နီးပါးပဲ.. ပန်းချီဟာ အရောင်တွေ အရုပ်တွေကို အခြေခံတာမို့ ကလေးတွေ စကားမတတ်ခင် စာမတတ်ခင်ကတည်းက သူတို့ပြောလိုရာ ဖော်ပြလိုရာကို ပန်းချီအခြေခံအနေနဲ့ ဖော်ပြတတ်ကြပါတယ်.. ကိုယ်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း မကြာခဏကြားဖူးနေတာပဲ “ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဆွဲတယ်.. နောက်မှ ဘာမှန်းကိုမသိတော့တာပါ” ဆိုတာမျိုးတွေ.. တကယ်တော့ ကလေးတွေမှာ နဂိုပါလာတဲ့ ပန်းချီဗီဇကို လူကြီးမိဘနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ပျောက်ကွယ်ပြောင်းလဲသွားအောင် လုပ်လိုက်တာပါပဲ.. Continue reading »
art and painting, fotografy, Poem
စာလုံး ၃၆ လုံးထဲနဲ့ ဖော်ပြသွားတာတွေက အများကြီးပါ.. အသက် ၈ နှစ်လောက်ကတည်းက ဖတ်ပြီး အဲ့ဒိမြင်ကွင်းတွေ အဲဒိအနံ့တွေကို ရလာတတ်တယ်.. ခုထိလည်း အဲဒိခံစားမှုကိုပေးတုန်းပဲမို့ အကြိုက်ဆုံးဖြစ်နေတုန်းပဲ..
illustrated and photo by NangNyi
Share Tweet Posted by NangNyi at 4:04 pm
ဝဘ်စာမျ​က်နှာ​တစ်ခု​ဟာ ကွန်ပျူ​တာ​ရဲ့​မျ​က်နြှာ​ပင်လို​ပါ​ပဲ.. စ​တု​ဂံ​ပုံ​သ​ဏ္ဍာန်နဲ့ြ​ဖစ်တ​ည်ေ​န​တာ​ပါ.. ပ​န်းချီ​ကားေ​တွ ဓာတ်ပုံေ​တွ​ကေ​တာင်မှ ပို​ရှည်လျားေ​န​တာမျိုး ဒါ​မှ​မ​ဟု​တ်ေ​လးေ​ထာ​င့်​စပ်စပ်ပုံ​သ​ဏ္ဍာန်မျိုြး​ဖ​စ်ေ​နနို​င်ေ​သး​တ​ယ်.. ဝဘ်စာမျ​က်နှာေ​တွ​ကေ​တာ့ လုံး⁠လုံးြ​ကီး​တို့​ ရှည်ရှ​ည်ြ​ကီး​တို့ြ​ဖ​စ်ေ​န​ဖို့​ အင်မ​တန်ခဲ​ယ​ဥ်း​တ​ယ်ေ​လ.. ဒီေ​တာ့ အေြ​ခ​ခံ​အားြ​ဖ​င့် စ​တု​ဂံေ​ပါ်​မူ​တ​ည်ြ​ပီး ဆ​က်ြေ​ပာြ​ပေ​ပး​ပါ​မ​ယ်.. အေ​ပါ်​က​ပုံ​ကိုြ​က​ည့်​လိုက်ပါ..ေ​ဘး​ဘ​က်ေ​တွ​မှာေ​ဘာင်ခတ်ထား​တဲ့ အနီမျ​ဥ်းေြ​ကာ​င်းေ​တွ​ရဲ့​ အြ​ပင်ဆို​ရ​င် လူ​ရဲ့​​စိတ်ဝင်စား​မှု​ကို မ​ရ​ပါ​ဘူး.. ဆိုလို​တာ​က ကို​ယ်ြ​ပချင်တဲ့ လူ.. ပ​စ္စ​ည်း.. အရာ​ဝ​တ္တု.. အမှတ်တံ​ဆိ​ပ် စ​တာေ​တွ​ကို အဲ့​ဒိမျ​ဥ်းေ​တွ​ရဲ​က​အလ​ည်ေ​တွ​မှာ​ပဲ ထ​ည့်​ရ​ပါ​မ​ယ်..ြ​ပ​ထား​တဲ့ ဆုံ​မှတ်အ​စက်အ​စိ​မ်းေ​လးေ​တွ​ဟာ​ဆို​ရ​င် Center of Interest လို့ေ​ခါ်​တဲ့ အဓိက​စိတ်ဝင်စား​မှု​ယူ​တဲ့ေ​န​ရာေ​တွြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ်.. ပ​န်းချီ​ကားေ​တွ ဓာတ်ပုံေ​တွ​မှာ​ဆို​ရ​င်ေ​တာ့ ကို​ယ်ြ​ပချင်တဲ့​အဓိက အေြ​ကာ​င်း​အရာ​ကို အဲ​လိုေ​န​ရာ​မှာ​ထားြ​ခ​င်း​ဟာ အေ​ကာ​င်း​ဆုံး​ပါ​ပဲ..
ဝဘ်စာမျ​က်နှာေ​တွ​အတွက်ကျေ​တာ့ အဓိကြ​ပချင်တဲ့​အရာ​ရယ်လို့​ သီး​သန့်​​မ​ရှိ​တဲ့​အြ​ပ​င် သူ​က ဘန်နာ​တို့​ Side Bar တို့​​ဆို​တာမျိုးေ​တွ​လ​ည်း ထ​ည့်​တွ​က်ေ​နရ​တဲ့​အတွ​က် သိ​ပ်ြ​ပီး​ပုံေ​သေ​တာ့ြေ​ပာ​လို့​​မ​ရ​ပါ​ဘူး.. အဲ​ဒီ​အခါမျိုးကျေ​တာ့ Weight and Balance ဆို​တာမျိုး​ကို ထ​ပ်ြ​ပီး​နား​လည်ရ​ပါေ​တာ့​မ​ယ်.. အေ​လး​အေ​ပါ့ချိန်ညှိ​တာမျိုး​ဆို​တာ​က ဘယ်လို​လဲဆိုေ​တာ့.. ဥပမာ..ေ​အာက်က​ပုံ ၂ ခု​ကို ယှ​ဥ်ြ​က​ည့်​ပါ.. ပထမ​ပုံ​မှာ​ဆို​ရ​င် ဘန်နာေ​ပါ်​က လို​ဂို​က​လ​ည်း ဘယ်ဘ​က်.. စာ​တန်း​က​ဘ​ည်း ဘယ်ကို​က​ပ်ေ​န​တ​ယ်.. Side Bar က​လ​ည်း ဘယ်ဘက်မှာ.. ဘန်နာ​ကို​ဆွဲ​ထား​တာ​က​လ​ည်းေ​ရ​လှို​င်း​ကညာ​ဘက်ကိုေ​ရာ​က်ေ​နြ​ပီးြ​ပတ်ထွ​က်ေ​န​တ​ယ်.. ဆိုေ​တာ့ြ​က​ည့်​သူရဲ့​ မျက်စိ​က ဘယ်ဘက်အြ​ခ​မ်း​မှာ သိ​ပ်ေ​လး​လံေ​န​တယ်လို့​ ခံစားေ​စ​ရ​မ​ယ်..ြ​ပီးေ​တာ့ြ​ပတ်ထွ​က်ေ​န​တဲ့ေ​ရ​လှို​င်း​ကြ​က​ည့်​သူရဲ့​ မျက်စိ​ကို ညာ​ဘက်အြ​ပင်ကို ထွက်သွားေ​အာ​င်ေ​ခါ်​သွား​တဲ့​အတွ​က် Balance မ​ညီ​တဲ့ေ​န​ရာ​ထား​သို​မှု​လို့ြေ​ပာ​ရ​ပါ​မ​ယ်.. ဒုတိယ​ပုံ​ကေ​တာ့ ဘန်နာ​နဲ့​ လို​ဂို​နဲ့​ Side bar နဲ့​ ထား​သိုထား​တာ​ဟာ အဆ​င်ြေ​ပေြ​ပ ညီ​ညွ​တ်ေ​န​တ​ယ်..ေ​ရ​လှို​င်း​ကို​လ​ည်း အတွ​င်း​မှာ​ပဲ ထ​ည့်​ထား​တ​ယ်..ြ​ပီးေ​တာ့ ညာ​ဘက်က ပ​န်းေ​ခွေ​လး​ဟာြ​က​ည့်​သူရဲ့့​မျက်စိ​အာ​ရုံ​ကို အြ​ပင်ကို ထွက်မ​သွားေ​စ​ဘဲ စာမျ​က်နှာ​ရဲ့​ အတွ​င်း​အလည်ဘက်က စာေ​တွ​ဆီ​ကိုြ​ပန်ညွ​န်ြ​ပေ​န​သ​လိုြ​ဖ​စ်ေ​န​တာ​မို့ြ​က​ည့်​တဲ့​လူ​ရဲ့​ အာ​ရုံ​ဟာ ဝဘ်စာမျ​က်နှာ​အထဲ​မှာ​ပဲ ပိတ်မိ​စု​စ​ည်းေ​န​မှာေ​ပါ့..ေ​န​ရာ​ထား​သို​မှု​မှာ အဲ​ဒီ​လိုမျိုးြ​ပန်ညွှ​န်ြး​ပမျ​ဥ်းေ​တွ​ဟာ သိ​ပ်ြ​ပီးေ​တာ့ အေ​ရးြ​ကီး​ပါ​တ​ယ်.. ဥပမာ.. ပ​န်းချီ​ကား​တစ်ချပ်ဆို​ပါ​စို့​.. သူ့​ ပ​န်းချီ​ကား တစ်ခု​လုံး​မှာြ​က​ည့်​စရာ​ဆိုလို့ေ​လှ​ပဲ​ရှိ​တ​ယ်..ေ​လှ​ကိုေ​တာင်မှ သူ​က Center of Interestေ​ဘာင်အ​တွ​င်း​မှာ မ​ထား​ဘူး..ေ​ရြ​ပင်ရဲ့​ ကျ​ယ်ြ​ပ​န့်​​မှု​ကိုြ​ပချင်လို့​ Space အကျ​ယ်ြ​ကီးြ​ပ​ထား​တ​ယ်.. ဒါေ​ပ​မ​ယ့် သူ​အဓိကြ​ပချင်တဲ့ေ​လှေ​လး​ကိုေ​ရ​လှို​င်းေ​တွ​ရဲ့​ အတွ​န့်ေ​တွ​နဲ့ြ​ပန်ညွ​န်ြ​ပ​ထား​တ​ယ်..ြ​က​ည့်​တဲ့​လူ​ဟာ စ​စချ​င်းေ​ရြ​ပ​င်ြ​ကီး​ကို​ပဲြ​မင်မ​ယ်.. လွတ်လပ်တ​ယ် ကျ​ယ်ြေ​ပာ​တ​ယ်..ေ​နာ​က်ေ​တာ့ မျက်စိ​ကေ​ရ​လှို​င်းေ​တွေ​ခါ်​ရာ​ကို လိုက်သွား​မ​ယ်.. သွား​တ​ယ် သွား​တ​ယ်.. တြ​ဖ​ည်ြး​ဖ​ည်းချ​င်း ဆွဲေ​ခါ်​သွား​တဲ့ေ​ရ​လှို​င်းေ​တွ​ဟာေ​နာက်ဆုံးေ​တာ့ ဒို​င်း​ဆိုြ​ပီးေ​လှ​ဆီ​ကိုေ​ရာက်တ​ယ်.. ဒါ​ပဲေ​လ.. သူ​လိုချင်တာ.. အဲ့​ဒိ​ပ​န်းချီ​ကား​မှာ အဲ့​ဒိေ​ရ​လှို​င်းေ​တွ​သာ​မ​ပါ​ဘူး​ဆို​ရ​င် လို​ရ​င်း​ကိုေ​ရာက်လာ​ပါ့​မ​လားေ​တာ​င် မ​သိ​ပါ​ဘူး..ြ​ပီးေ​တာ့ေ​န​ရာ​ထား​သို​တဲ့​အခါ​မှာ အလယ်တ​ည့်​တ​ည့်​မှာ က​န့်​​လ​န့်ြ​ဖတ်သေ​ဘာမျိုးေ​ဒါင်လို​က်ြ​ဖတ်သေ​ဘာမျိုြး​ဖ​စ်ေ​နေ​စ​တဲ့ အရာ​ဝ​တ္တုေ​တွ​ကို မ​ထား​ရ​ပါ​ဘူး.. တေ​စာ​င်း​လို​က်ြ​ကီးြ​ပ​တ်ေ​န​တာမျိုး​ကို​လ​ည်း မ​လုပ်ရ​ဘူး.. တ​မင်သက်သ​က်ေ​ပးချင်တဲ့ ရသ​တစ်ခု​ခု​ရှိ​လို့​ ထ​ည့်​မယ်ဆို​ရင်လ​ည်း အေ​ပါ်​ကေ​လှ​နဲ့ေ​ရ​လှို​င်း​လို​ပဲြ​ပန်ညွ​န်ြး​ပ​စရာြ​ပ​န်ြေ​ဖဖျော့​စရာ​တစ်ခု​ခု ထ​ည့်ေ​ပးေ​လ့​ရှိ​ပါ​တ​ယ်.. ဒါေ​တွ​က ဓာတ်ပုံ​နဲ့​ ပ​န်းချီ​သမားေ​တွ.. ဗီနို​င်း​လုပ်တဲ့​ဒီ​ဇို​င်း​သမားေ​တွ​လ​ည်းေ​တာ်ေ​တာ်​သတိထား​ရ​မ​ယ့် အချ​က်ေ​တွ​ပါ​ပဲ.. ကွန်ပိုေ​ဇး​ရှ​င်း​အေြ​ကာ​င်း​ကေ​လ..ြေ​ပာ​ရ​မယ်ဆို​ရ​င် အများြ​ကီး​ပဲ.. အဝို​င်း​လွှ​မ်း​မိုး..ေ​လးေ​ထာ​င့်​လွှ​မ်း​မိုးေ​တွ စ​တဲ့ လွှ​မ်း​မိုး​မှုေ​တွ​လ​ည်း ထ​ည့်ြေ​ပာ​ရ​ဦး​မ​ယ်..ေ​နာက်မှ​ပဲ တ​ခုချ​င်း​စီ​အေြ​ကာ​င်း အေ​သး​စိတ်ထ​ပ်ြေ​ပာ​ပါ​မ​ယ်..ေ​လာေ​လာ​ဆ​ယ်ေ​တာ့ ဘား​က​န့်​​မှာ​တု​န်း​ကြေ​ပာ​ခဲ့​သေ​လာက်ပဲ အြ​က​မ်းဖျ​င်းြ​ခုံ​ငုံြ​ပီးြေ​ပာြ​ပ​သွား​တာ​ပါ..ေ​နာက်မှ perspective လို့ေ​ခါ်​တဲ့ နီးေ​ဝးြ​မ​င်ြ​ခ​င်း​သေ​ဘာ​တရားေ​တွ​ကို ထ​ပ်ြေ​ပာ​ပါ​မ​ယ်.. Peace to all !! Share Tweet Posted by NangNyi at 1:01 pm
မြန်မာ့ပန်းချီအစနဲ့ အခြေခံမြန်မာ့ပန်းချီလေးမျိုးဖြစ်တဲ့ ကနုတ် နရီ ကပီ ဂဇာတွေအကြောင်းကို ဒီမှာ ပြောခဲ့ဖူးပြီးပါပြီ.. အခုတော့ မြန်မာ့နံရံဆေးရေးပန်းချီတွေအကြောင်း နည်းနည်းဆက်ပြောပြကြည့်မယ်လေ.. မြန်မာပြည်မှာ အစောဆုံးနံရံပန်းချီကတော့ ကျောက်ခေတ်လူသားတွေရဲ့လက်ရာလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ ရွာငံဒေသ၊ ပြဒါးလင်းဂူနံရံက ပန်းချီတွေပါပဲ.. သမိုင်းမတင်မီ ကျောက်ခေတ်လက်ရာတွေမှာ ကျောက်ခေတ်လူသားတွေရဲ့ လူနေမှုဘ၀၊ အမဲလိုက်ကြပုံနှင့် သဘာဝကို ကိုးကွယ်ခြင်း အလေ့အထများကို လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်.. တောင်ကမ်းပါးကြားက နေထွက်ပုံ၊ လက်ဝါးပုံ၊ သားကောင်ပုံများကို ရေးဆွဲလေ့ရှိကြပြီး လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၇၀၀၀ ခန့်က ရေးဆွဲခဲတယ်လို့ ခန့်မှန်းရတယ်.. အဲဒိပုံတွေကတဆင့် ကျောက်ခေတ်လူသားတို့ရဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် နေထိုင်အသက်မွေးပုံ အတိတ်သမိုင်းတို့ကို သိရှိနိုင်တာပေါ့.. (အန်ဒီကောင်ကတော့ ငြင်းပါတယ်.. အဲဒိဂူလက်ရာတွေဟာ ပန်းချီလို့ ဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲတဲ့.. စာလုံးတွေမပေါ်သေးလို့ အဲလိုတွေရေးထားခဲ့တာဆိုတော့ ပန်းချီအစမဟုတ်ဘဲ စာအစလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲတဲ့.. သူနဲ့အတော်လေး ငြင်းခုန်ခဲ့ရပါသေးတယ်)
သူငြင်းလို့မရတဲ့ တကယ့်နံရံဆေးရေးပန်းချီတွေကိုတော့ ပုဂံခေတ် ဂူဘုရားတွေ သိမ်ကျောင်းတွေမှာ တွေ့ရမှာပါ.. အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း အနော်ရထာမင်းဟာ ပုဂံမှာစစ်မှန်တဲ့ ထေရဝါရသာသနာထွန်းကားအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်.. သာသနာရေးနဲ့အတူ လက်မှုပညာအမျိုးမျိုး တိုးတက်လာဖို့လည်း အားပေးချီးမြှင့်ခဲ့တာပါပဲ.. ဒါပေမယ့်လည်း ဗိသုကာ ပန်းချီ ပန်းပုစတာတွေက အနော်ရထာမင်းလက်ထက်မှာ အစပျိုးသဘောလောက်ပဲဖြစ်သေးတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်.. သူတည်ခဲ့သမျှဘုရားတွေဟာ မြေစိုက်စေတီတွေပဲဖြစ်လို့ပါပဲ.. ဒေါက်တာမတင်ဝင်းရဲ့ ကျန်စစ်သားစာအုပ်ထဲမှာတော့ အနော်ရထာဟာ မင်းပရိတ်သတ် ပြည်သူပြည်သားတို့နဲ့ ခြားနားသီးသန့်နေချင်တဲ့သဘောမို့သာ အပြင်ဘက်ကပဲ ဖူးမျှော်လို့ရတဲ့ မြေစိုက်တွေကိုတည်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချထားပါတယ်.. အတွင်းစိတ်သဘောဟာ ဘုရားတည်ရာမှာပေါ်တယ်လို့ သူဆိုလိုချင်ပုံပဲ.. အင်း- ထားပါတော့လေ… ကျန်စစ်မင်းလက်ထက်မှာတော့ ဂူဘုရားတွေတည်နေပြီ.. ဂူဘုရားတွေရဲ့သဘောက အတွင်း ဂန္ဓကုဋိတိုက်ကိုရံပြီး စင်္ကြန်လမ်းတွေထားရတယ်.. မုခ်အဝင်မှာ အာရုံခံရှိတော့ ဂန္ဓကုဋိတိုက်နံရံ၊ စင်္ကြန်နံရံနဲ့ အာရုံခံနံရံတွေဟာ ပန်းချီရေးဖို့ နေရာကောင်းတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်.. ပုဂံခေတ်ကျောက်စာတွေမှာ ဂူဘုရားတည်ရင် အတွင်းမှာ ဆေးရေးလေ့ရှိကြောင်းနဲ့ ပန်းချီသမားတွေကို လုပ်ခတွေပေးရကြောင်းတွေ မှတ်တမ်းပါပါတယ်.. အဲဒိအချိန်မှာတော့ ပန်းချီပန်းပုပညာတွေဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ကို တိုးတက်လာနေပါပြီ.. ပုဂံခေတ်ဆေးရောင်တွေက ခေတ်ဦးပိုင်းမှာဆိုရင် အဖြူ အနက် အဝါ အနီပဲ အသုံးများပါတယ်.. ခေတ်နှောင်းပိုင်းမှာမှ အပြာနဲ့ အစိမ်းကိုပါသုံးလာကြတယ်.. အင်္ဂတေနံရံမှာ ဆေးရောင်စွဲနေဖို့ တမာစေးနဲ့တွဲသုံးပါတယ်.. အရောင်တောက်အောင် သည်းချေကိုရောပါတယ်.. အဖြူရောင်ကို မြေဖြူကထုတ်.. အနက်ကို ရေနံချေးမှိုင်းက.. အဝါကို မြေဝါခဲတွေက.. အနီကို ဟင်္သပဒါးနဲ့ မြေနီကရ.. အပြာကိုမဲနယ်က.. အစိမ်းကို ဒုတ္တာစိမ်းကနေ ဖော်စပ်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်.. ပုဂံဆေးရေးတွေရဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ ဗုဒ္ဓဝင်ခန်းတွေ ငါးရာ့ငါးဆယ်နိပါတ်တွေများပါတယ်.. သရုပ်ဖော်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကို အောက်ခြေမှာ မွန်ဘာသာ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာဘာသာနဲ့စာတန်းထိုးထားလေ့ရှိပါတယ်.. တချို့နံရံတွေမှာဆို ပါဠိတော်တွေက ကောက်နုတ်ချက်တွေနဲ့ ဘုရားလှူသူ နံရံပန်းချီလှူသူ ကုသိုလ်ရှင်ရဲ့ မှတ်တမ်းစာတွေ ဆုတောင်းစာတွေ ဇာတာခွင်တွေကိုလည်း ထည့်ရေးထားလေ့ရှိတယ်.. ပုဂံခေတ်နံရံဆေးရေးတွေက နှစ်ပေါင်းကလည်းကြာပြီဆိုတော့ အင်္ဂတေကွာကျပျက်စီးတာတွေ.. မှေးမှိန်ပွန်းပဲ့သွားတာတွေ.. အညစ်အကြေးတွေစွဲလို့ မထင်မရှားဖြစ်ကုန်တာတွေ.. သဒ္ဓါလွန်ပြီးထုံးသုတ်ပူစော်ပစ်လိုက်လို့ ပျောက်သွားတာတွေ.. ခိုးယူခံရတာတွေ.. တချို့ကနားမလည်ပဲ ထုံးသုတ် အသစ်ပြန်ရေးထားတာတွေကြောင့်နဲ့ ရှေးဟောင်းပန်းချီလက်ရာအတော်များများ ဆုံးရှုံးကုန်ပါပြီ.. ဒါကြောင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကလည်း မှတ်တမ်းတင်ပုံများ ရေးထား.. ပန်းချီကျောင်းသားများကလည်း လေ့လာရေးသွားတိုင်းကူးယူရေးပြီး သိမ်းထားကြ.. မှိန်နေတဲ့နေရာတွေ ထင်လာဖို့.. ထပ်ပြီးမပျက်စီးစေဖို့ ဓာတုနည်းတွေနဲ့ထိန်းသိမ်းနေကြပါတယ်.. ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် ပုဂံဘုရားနံရံတွေကို ဓာတ်ပုံပေးမရိုက်တော့ပါဘူး.. ဖျတ်ကနဲလက်သွားတတ်တဲ့ ကင်မရာဖလက်ရ်ှဂန်းမီးရောင်ဟာ သဘာဝဆေးနဲ့ရေးထားတဲ့ ပန်းချီတွေကိုပျက်စီးစေနိုင်လို့ပါ.. အများအားဖြင့် အဲဒိကန့်သတ်ချက်ကို နိုင်ငံခြားသားလေ့လာသူတွေက (နိုင်ငံခြားမှ ပညာတတ်လေ့လာသူအချို့က) လိုက်နာပေမယ့် မြန်မာခရီးသွားတော်တော်များများ (တော်တော်များများ)ကတော့ အလစ်တွေမှာ ခိုးခိုးဓာတ်ပုံရိုက်တတ်ပါတယ်.. တကယ်တော့လည်း မြန်မာပြည်သူတော်တော်များများဟာ ဒီနံရံပန်းချီရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ အရေးပါပုံကို မသိတာများပါတယ်.. ဒါတွေလှတယ်လို့လည်း မထင်တာများပါတယ်.. ပုဂံရောက်မှတော့ ဒါလေးမှ ဓာတ်ပုံမရိုက်လိုက်ရရင် မနေနိုင်လို့.. ပြီးတော့ တားမြစ်ထားလို့ ပိုရိုက်ချင်လို့သာ ဓာတ်ပုံရိုက်သွားတာပါ.. ပန်းချီတွေကို တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပေမယ့်လည်း ဘုရားထဲမှာ တခြားနေရာကို ရိုက်ရုံနဲ့တင် နံရံပန်းချီတွေဆီ အလင်းပြန်တတ်ပါတယ်.. မကောင်းပါဘူး.. တတ်နိုင်သလောက်တော့ ဘုရားထဲမှာ ဓာတ်ပုံမရိုက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်.. နံရံကိုလက်နဲ့မကိုင်ပါနဲ့လို့ တားမြစ်ပေမယ့် ဘာကြောင့်ရယ်မသိ မလုပ်နဲ့ဆို ပိုလုပ်ချင်ကြတဲ့ ထုံးစံအတိုင်း လမ်းလျှောက်သွားရင်း နံရံကိုလက်နဲ့တစ်လျှောက်လုံးထိပွတ်သွားတာမြင်ဖူးပါတယ်.. အဲဒိမိသားစုကို နန်းညီကိုယ်တိုင် အနားခေါ်ရှင်းပြဖူးပါတယ်.. သေချာရှင်းပြတော့လည်း သူတို့လက်ခံတာပါပဲ.. နိုင်ငံတကာအလယ်မှာ ချပြနိုင်တဲ့ မြန်မာ့ရှေးရိုးပန်းချီတွေကို နားလည်တတ်ဖို့ ထိန်းသိမ်းတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့အသိကိုလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နဲ့ ပြည်သူတွေဆီရောက်အောင်ပို့ပေးဖို့ လိုနေသေးတာတော့ အမှန်ပါပဲ.. Share Tweet Posted by NangNyi at 12:19 pm
မြန်မာပန်းချီအစလို့ပြောရမယ်ဆိုရင် အိန္ဒိယပြည်ကနေတဆင့် မြန်မာဆီကိုပြန့်နှံ့လာခဲ့တဲ့ အရှေ့တိုင်းပန်းချီအကြောင်းကိုပဲ ပြောရမှာပဲပေါ့.. အိန္ဒိယပန်းချီကနေ မြန်မာ့ဟန်၊ မြန်မာ့အသွင်ကိုပြောင်းလာခဲ့တာ.. သေချာတွေးမယ်ဆိုရင် ဘာသာအယူဝါဒတွေ ယဉ်ကျေးမှုအစိတ်အပိုင်းတွေ အားလုံးက အိန္ဒိယကနေတဆင့် မြန်မာကိုပျံ့ပွားလာတာတွေချည်းပဲလေ.. မြန်မာပန်းချီခေတ်ဦးမှာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပန်းချီကားတွေများခဲ့တယ်.. ဇာတ်နိပါတ်တွေရေးရာမှာတော့ တောင်တောင်ရေမြေ သဘာဝရှုခင်းတွေ.. မြို့ရွာကျေးလက်ရှုခင်းတွေ.. နန်းတွင်းအခမ်းအနားတွေပါ ပါဝင်တဲ့အတွက် လူတန်းစားအမျိုးမျိုးရဲ့ ဝတ်ပုံစားပုံနဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ.. အတီးအမှုတ်တူရိယာတွေ.. သွားလာလှုပ်ရှားပုံဓလေ့တွေကိုပါမြင်ခွင့်ရတယ်.. ရှေးမြန်မာပန်းချီမှာ အဓိကအားဖြင့် အခြေခံပန်းချီ ၄ မျိုးရှိတယ်.. ကနုတ်၊ နရီ၊ ကပီ၊ ဂဇာ တဲ့.. ကနုတ်ဆိုတာ သကဋဘာသာ “ကောကနဒ” ကနေဖြစ်လာတာ.. ကြာခွေ၊ ကြာလိပ်၊ ကြာရိုး၊ ကြာစွယ်သဏ္ဍာန်တွေကို ဆိုလိုတယ်.. အဲဒိကြာ အခွေ အငုံ အဖူး အလိပ် အရိုး အပွင့် အသီး အရွက် အပွင့် ဝတ်ဆံ ..စတာတွေကို ကော့ခွေလိမ်ကောက် အချီအချ အတက်အဆင်းတွေနဲ့ အဆန်းတကြယ်ထုဆစ်တယ်.. ပုံဖော်ရေးဆွဲတယ်.. ခြူးပန်းခြူးနွယ်တွေပေါ့လေ.. ကနုတ်ပန်းလက်ရာတွေကို ပန်းချီမှာသာမကဘဲ ကျောက်ဆစ်ပန်းတမော့၊ ပန်းတော့ တွေမှာလည်းသုံးတယ်.. ဒီတော့ ကနုတ်ပန်းအတတ်ဆိုတာ ခြူးပန်းခြူးနွယ်တွေရေးတာမျိုးတင် မဟုတ်ဘဲ အချွန်အတက် အသွယ်အပြောင်း အတွန့်အလိမ်သဘောသက်ရောက်တဲ့ ဘယ်အရာဝတ္တကိုမဆိုရေးဆွဲတယ်လို့ ယူဆရမှာပေါ့.. နရီဆိုတာကတော့ အမျိုးသမီးဆိုတဲ့သဘောပဲ.. မြန်မာပန်းချီမှာ မင်းသား မင်းသမီးစတဲ့ လူရုပ်တွေအပြင် နတ်ဗြဟ္မာရုပ်တွေ ဆင်းတုတွေ ရုပ်ထုတွေ.. အဲဒါတွေကို အချိုးအဆက်ပြေပြေ ပြစ်ပြစ်ရေးဆွဲတာကို နရီလို့ခေါ်တာပါပဲ.. ကပီရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကတော့ မျောက်ရုပ်ရေးနည်းပါ.. မျောက် ဘီလူး ဟင်္သာ ခြင်္သေ့ နဂါး ကိန္နရီကိန္နရာ အစရှိတဲ့ မြန်မာဒဏ္ဍာရီလာအရုပ်တွေရေးတာမျိုး.. အဲဒိအကောင်တွေကို ကနုတ်တွေနဲ့ လှလှပပ တန်ဆာဆင်ရေးကြလေ့ရှိတယ်.. သွက်လက်မြူးထူးစွာ လှုပ်ရှားတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေ.. ငှက်တွေ.. ကခုန်တတ်တဲ့သတ္တဝါတွေ စသဖြင့် အမြူးအကြွ အခုန်အက သဘောရှိတဲ့ဟာတွေကို ရေးဆွဲတာကို ကပီလို့ သတ်မှတ်တာပါပဲ.. ဆင်လို ကြီးမားတဲ့ကိုယ်ထည်ရှိတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ရေးတာမျိုးကို ဂဇာလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်.. ထုထည်ကြီးမား မြင့်မောက်သော အရာဝတ္တုတွေ.. တည်ငြိမ်မှုသဘောပါဝင်တဲ့အရာတွေကို ရေးတာကိုလည်း ဂဇာလို့ခေါ်တယ်.. ထည်ဝါတည်ငြိမ်မှုသဘောသက်ရောက်စေတဲ့ ရေးဆွဲခြင်းတွေဟာ ဂဇာပါပဲ.. ဒီတော့ မြန်မာ့ပန်းချီဟာ အနောက်တိုင်းပန်းချီလို အနီးအဝေးတွေ ထုထည်သဘောတွေ အရောင်သဘောတွေမပါဘဲ ကောက်ကြောင်းရေးဆေးခြယ်ပဲဆိုပေမယ့် ပါဝင်တဲ့ အရာဝတ္တုတွေရဲ့ သဘောသရုပ်ကိုတော့ ပေါ်လွင်စေအောင်ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်.. အရာဝတ္တုတိုင်းရဲ့ သဘာဝသရုပ်ကို အခြေခံအားဖြင့် ၄ မျိုးခွဲပြီး တသီးတခြားသတ်မှတ်ခဲ့တယ်.. ပြောရမယ်ဆိုရင် ပကတိအသွင်အပြင်ကို တူညီအောင်ကူးရေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အကော့အလိမ်တွေ ပိုမိုပျောင်းနွဲ့တဲ့ဟန်တွေနဲ့ အသေးစိတ်ခြယ်မှုန်းတဲ့ ရေးဟန်ဖြစ်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်.. Share Tweet Posted by NangNyi at 12:17 pm
Ciao ဆိုတာ ဘာမှ မဟုတ်ပါ.. စိတ်ထဲမရှင်းမရှင်းဖြစ်တာ မေးမိတာ..း)
ဒီမှာ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ဟင်္သာ ဂဠုန်နဲ့ ကိန္နရီ ကိန္နရာ.. Scan တော့သိပ်မကောင်းလှပေမယ့် အားလုံးအတွက်ပါ.. ပျော်ပါစေ Peace !! ဟင်္သာဖို မ ပုံ
Share Tweet Posted by NangNyi at 9:34 am